Zimbabwean President urges chinese investment in tourism sector
FILE PHOTO: Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa attends a meeting with labour unions in Harare
By Xinhua Jul 24, 2019
HARARE –Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Tuesday urged Chinese investors to invest in Zimbabwe's tourism sector and help turn the southern African country into a competitive tourist destination.
He made the remarks on the occasion where a visiting delegation from China's Zhejiang Province and the Zimbabwean government officials and business leaders witnessed the signing of a twinning arrangement between Zimbabwe's Chinhoyi City and China's Dongyang City.
"I urge you, prospective investors (from China), to seize this opportunity to turn Victoria Falls into a competitive tourism hub and financial center," Mnangagwa said.
Zimbabwe hikes fuel price again
Ge Huijun, head of the Chinese delegation and chairman of the People's Political Consultative Conference (CPPCC) Zhejiang Provincial Committee, said China was keen to consolidate its friendly ties and cooperation with Zimbabwe, particularly in the tourism sector.
"Zimbabwe is an important partner of China in Africa. Today, we come from afar to Zimbabwe to comprehensively strengthen our exchanges and collaboration with Zimbabwe and set an example of mutually beneficial cooperation between China and Africa," Ge said.
Bilateral trade between Zhejiang and Zimbabwe grew by 17.32 percent in 2018 to 180 million US dollars, and there was huge potential for further growth, Ge said.
She urged Zimbabwean companies to participate in China's business events to grow business opportunities and expand cooperation between the two countries.